Mitohy hatrany ny hetsika « Gasy Bulles », « festival » momba ny tantara an-tsary (BD). Hiavaka ny fandaraham-potoana, rahampitso hariva etsy amin’ny AFT Andavamamba. Hisy ny atao hoe « Soirée défoulement graphique ». Hisongadina ao anatin’izany ny fanaovana sary eo no ho eo, ravahin’ny mozika. Mitohy koa ny fampianarana manao sary ho an’ny ankizy, etsy amin’ny IFM Analakely.
Manamarika ny dimy taona nijoroany ny tarika Ny Mino. Tarika mitory ny Filazantsara an-kira, any ivelany any. Tonga eto an-toerana ireo mpikambana, teratany malagasy, ary tsy handalo fotsiny fa hanolotra seho goavana, etsy amin’ny CC Esca ny alahady tolakandro izao. Fanambin’izy ireo ny hanolotra ny tsara indrindra. Tsy matetika ihany koa no misy fihaonana amin’ity tarika ity eto an-tanindrazana.
Anio hariva, hitondra an-tsehatra ny tantara nosoratany, mitondra ny lohateny hoe « Arrêt sur image » i Gustave Akakpo, teratany togoley, mpanoratra, mpilalao tantara an-dampihazo, mpanentana. Rahampitso kosa, hisy ny « Lecture électro » na famakiana sy filalaovana tantara, toy ny any amin’ny onjampeo, iarahana amin’ity mpanakanto malaza ity.
Nangonin’i Landy R.